काठमाडौं,. १९ असोज मंगलबार र बुधबार राजधानीका दुई स्थानमा खुकुरी आक्रमण भएको छ । भक्तपुरको कमलविनायक र नैकापमा खुकुरी प्रहार भएको हो । भक्तपुर नगरपालिका–४ कमलविनायक बस्ने ४२ बर्षीय नारायण आचार्यले स्थानीय महिलालाई खुकुरी प्रहार गरी गम्भीर घाइते बनाएका छन् । आचार्यले मंगलबार सोही ठाउँ बस्ने ३१ बर्षीया सविका त्वया बासुलाई मंगलबार टाउकोमा खुकुरी प्रहार गर्दा गम्भीर घाइते भएकोले उपचारको लागी वि.एण्ड.वि.अस्पताल… विस्तृत समाचार
विगतमा टानमा धेरै समस्याहरु थिए, तपाईको नेतृत्वमा नया“ कार्यसमिति आएपछि के के सुधार भए ? चुनावको क्रममा हामीले पहिला टान सचिवालयलाई सुधार गर्छाै भनेका थियौं । हामी आइसकेपछि सुधारका संकेतहरु देखापरेका छन् । टानमा राम्रो सीईओ र एकाउन्टेन्टको अभाव थियो । सचिवालय व्यवसायीको कुरा सुन्ने, बुझ्ने र कार्यान्वायन गर्ने खालको थिएन । धेरै कुरा परिवर्तन गर्न हामी बिशेष साधारणसभामा जानुपर्छ । नियम कानुनलाई ‘ओभरटेक’ गरेर… विस्तृत समाचार
बुधबारदेखि नेपाक(एमाले)को केन्द्रीय कमिटि बैठक सुरु भएको छ । सोही बैठकका विषयमा एमाले सचिव योगेश भट्टराईसँगको कुराकानी अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतप्रति ‘आक्रामक’ रूपमा आएको छ नि, किन ? अध्यक्षले सातौँ केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनका रूपमा धारणा प्रस्तुत गर्नुभएको छ । प्रतिवेदनमा प्रस्तुत सबै विषयमाथि बैठकमा छलफल हुने नै छ । भारत, माओवादी केन्द्र र कांग्रेसलाई हेर्ने दृष्टिकोणलगायत सबै विषय प्रतिवेदनमा… विस्तृत समाचार